यसकारण गरिन्छ नग्न योग !!!थाहापाइ राखनु … – News Nepali Dainik
यसकारण गरिन्छ नग्न योग !!!थाहापाइ राखनु …
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र ०७, २०७७ समय: २१:४९:०१
काठमाडौं । युगल योग, हट योग पछि, न्युड योग वा नग्न योग लोकप्रिय भइरहेको छ। यसको लोकप्रियता बढ्दै गइरहेको छ। नग्न योग एक अवस्था हो जहाँ एक व्यक्तिले आफ्नो कपडा निकालेर योग गर्ने गर्छन् ।
यो योग अमेरिका, क्यानडा, फ्रान्स, स्पेन, अष्ट्रेलिया, आदि जस्ता देशहरूमा यो योग झनै बढी प्रचलनमा छ । फिटनेसको हिसाबले यसका धेरै फाइदाहरू छन् ।
जसले नग्न योगलाई असहज महसुस गर्दैनन् त्यो अवस्थामा पुगेपछि मान्छेले आफूले आफैँलाई अरूभन्दा फरक देख्न थाल्छ । उसको दिमाग शान्त रहन्छ र शरीर र आत्मा पनि उत्तम अवस्थामा पुग्छ ।
यदि तपाईंमा डिप्रेसन वा तनावको समस्या छ भने त्यस्तो अवस्थामा आफैँलाई एउटा कोठामा बन्द गर्नुहोस् र नग्न योगको अभ्यास सुरू गर्नुहोस् । एक शोधले पत्ता लगाएको छ कि नग्न योग गर्ने मान्छेले आफूलाई स्वतन्त्र महसुस गर्छन् । तपाईंको मानसिक विकास तब मात्र सम्भव छ जब तपाईंको आत्माले तपाईंको शरीर र दिमागलाई बुझ्न सक्छ।
यदि तपाईं एक्लो योग गर्दै हुनुहुन्छ भने सोलो पोजमा रहनुहोस् । गलत आसनले पनि क्षति निम्त्याउन सक्छ। नग्न योग गर्नुअघि, म्याट फैलाउनुहोस् र नुहाएपछि मात्र यो योग गर्न सुरु गर्नुहोस् ।
यो शारीरिक तथा मानसिक लाभ हाँसिल हुनेछ। नग्न योग वास्तवमा शरीर र दिमागका लागि राम्रो मानिन्छ। यो हाथायोगिसको उपहार हो। यस लेखमा वा प्रशिक्षकको सल्लाहमा दिइएका तरिकाहरू अपनाएर नग्न योग गर्नुहोस्।
Last Updated on: March 20th, 2021 at 9:49 pm